Golaha Guud ee UNWTO ayaa lagu booriyay in dib loo dhigo: WTO si aan xad lahayn ayaa dib loo dhigay!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Golaha Guud ee UNWTO ayaa lagu booriyay in dib loo dhigo: WTO si aan xad lahayn ayaa dib loo dhigay!
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Wararka Spain • Warka Safarka Safarka • Wtn
Golaha Guud ee Qaranka Ururka Ganacsiga Adduunka (WTO) Waxaa la isku raacay dabayaaqadii Jimcihii (26 November) in dib loo dhigo Shirka Wasiirada ka dib markii uu dillaacay nooc gaar ah oo la kala qaadi karo oo ah Omicron Covid Variant virus B.1.1.529 taasoo keentay in dowlado dhowr ah ay soo rogaan xayiraad dhanka safarka ah oo ka hor istaagi lahayd wasiiro badan inay gaaraan Geneva.
Ma jirin wax jawaab ah markii eTurboNews la xiriiray Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO)) haddii Golaha Guud ee soo socda ee Madrid loo qorsheeyay isla wakhtiga Golaha Guud ee WTO sidoo kale dib loo dhigi doono.
Xoghayihii hore ee UNWTO Francesco Frangialli si kastaba ha ahaatee bayaan uu soo saaray Jimcihii wuxuu yidhi:
"Marka la eego khatarta cusub ee caafimaadka iyo aragtidayda, waxay noqon lahayd mid caqli-gal ah UNWTO iyo Spain inay ka tanaasulaan sababtan cad ee caafimaad ee xooggan ee wufuudda iyo wasiirradu inay u safraan Madrid dhowr maalmood gudahood.
Wufuud ayaa la filayaa inay ka kala yimaadaan meelo badan oo caalamka ah. Intaa waxaa dheer, takoorka dhabta ah ee ka dhalan kara wakiilada degan wadamada leh xayiraadaha safarka, gaar ahaan dhowr Waddan oo Afrikaan ah ayaa ah mid aan la aqbali karin Ururka halkaas oo kaqeybgalayaasha loola dhaqmo si siman.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka waxa uu si degdeg ah u bogaadiyay hadalkan ku soo beegay ee ka soo yeedhay Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay, gaar ahaan iyadoo la eegayo muhiimadda uu Golaha Guud ee UNWTO u leeyahay ka-qaybgalayaasha faraha badan ee ka diiwaangashan Afrika.
Cuthbert Ncube, Gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika Hadda ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysa Ruwaanda waxay ku heshiiyaan WTN iyo Xoghayihii hore ee Guud.
At Hay'adda Ganacsiga Adduunka, Shirka 12-aad ee Wasiirada (MC12) ayaa lagu waday inuu bilowdo 30ka Noofambar wuxuuna soconayaa ilaa 3 Disembar, laakiin ku dhawaaqida xayiraadaha safarka iyo shuruudaha karantiil ee Switzerland iyo dalal kale oo badan oo Yurub ah oo uu hogaaminayo Guddoomiyaha Golaha Guud Amb. Dacio Castillo (Honduras) si uu ugu yeero kulan degdeg ah dhammaan xubnaha WTO si loogu sheego xaaladda.
“Marka la eego dhacdooyinkan nasiib darrada ah iyo hubanti la’aanta ay keenayaan, ma aragno wax beddel ah oo aan ahayn in aan soo jeedinno in shirka dib loo dhigo oo dib loo qabto sida ugu dhaqsaha badan marka ay xaaladdu saamaxdo,” ayuu yiri Amb. Castillo ayaa u sheegay Golaha Guud. "Waxaan ku kalsoonahay in aad si buuxda u qadarin doonto halista xaalada."
Agaasimaha guud ee Ngozi Okonjo-Iweala ayaa sheegtay in caqabadaha safarka ay ka dhigan tahay in wasiiro badan iyo wafuud sare aysan ka qayb qaadan karin wada xaajood fool ka fool ah oo ka dhacaya Shirka. Tani waxay ka dhigaysaa ka qaybgalka si siman mid aan macquul ahayn, ayay tidhi.
Waxay tilmaantay in wufuud badani ay muddo dheer ku adkaysanayeen in shirku aanu si dhab ah u bixinayn nooca is dhexgalka lagama maarmaanka u ah qabashada wada xaajoodyada adag ee arrimaha siyaasadda xasaasiga ah.
"Tani ma ahayn talo fudud oo la soo jeedinayo … Laakiin Agaasimaha Guud ahaan, mudnaantaydu waa caafimaadka iyo badbaadada dhammaan ka qaybgalayaasha MC12 - wasiirrada, wufuudda, iyo bulshada rayidka ah. Way fiicantahay in laga qaldamo dhinaca taxadarka, "ayay tiri, iyadoo xustay in dib u dhigista ay sii wadi doonto in WTO ay raacdo xeerarka Swiss.
Xubnaha WTO waxay si isku mid ah u taageereen talooyinka ka yimid Agaasimaha Guud iyo Guddoomiyaha Golaha Guud, waxayna ballan qaadeen inay sii wadi doonaan ka shaqaynta yaraynta khilaafaadkooda mawduucyada muhiimka ah.
Waxa kaliya oo la rajayn karaa in Hay’adda Dalxiiska Adduunka ee uu hoggaamiyo Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili ay isla welwelka ka qabaan Wasiirrada Dalxiiska, oo ay fahmaan muhiimadda ay leedahay bixinta wufuud ka kala socota Koonfur Afrika, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Zambia, iyo kuwa kale. Wadamada Afrika, Belgium iyo Hong Kong isla dareenka Ururka Ganacsiga Adduunka ayaa sameeya.
Maanta guddoomiyaha New York ee dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolkeeda, in kasta oo aan weli la helin kiis nooc cusub oo fayraska ah.
Kiisaska ayaa laga helay Koonfur Afrika, Botswana, Belgium, iyo Hong Kong, waxaana la filayaa inay ku faafo.
Geneva, waxay u tahay riyo ku ah Ururka Ganacsiga Adduunka.
Shirkan ayaa la filayey muddo afar sano ah. Waxaana jiray go'aamo waaweyn oo laga gaarayo ganacsiga adduunka sidii go'aanno gudaha ah oo lagu gaarayo Hay'adda.
Xaqiiqooyin adag ee UNWTO si ay go'aankan u gaadho:
Ma jiro wax qodob ah oo ku jira Xeerarka UNWTO ee ka hadlaya nooca xaaladda degdegga ah. Tixraaca keliya ayaa noqon kara qodobka 20-aad ee xeer-hoosaadka kaasoo siinaya Golaha Fulinta awoodda ay ku qaadan karaan dhammaan go’aammada lagama maarmaanka ah inta u dhaxaysa labada kalfadhi ee Golaha.
Haddi goluhu rabo inuu hogaanka qabto, waxay si cad u ahaan lahayd doorkiisa. Qodobka ugu weyn ayaa ah in aysan jirin safiiro jooga Madrid gaar ahaan UNWTO, si la mid ah ururada waaweyn ee adduunka.
Wax badan ayaa ku xirnaan doona habdhaqanka iyo go'aamada Dowladda Isbaanishka maadaama aysan ahayn oo keliya caafimaadka wufuudda iyo caafimaadka xubnaha shaqaalaha ee khatarta ku jira, laakiin badbaadada dadka deggan Madrid.